Ii -apps ezichasene ne-COVID-19 kunye nengxaki yebhetri | IPhone iindaba
Ibhetri yinto exabisekileyo, uninzi ngoku luyaqonda ukuba lubotshelelwe kwifowuni yevidiyo okanye usetyenziso olunxulumene nomnxeba, usetyenziso oluhlaziya rhoqo, ukufumana izaziso kunye nokusebenza ngasemva.
Njengoko sisazi kakuhle, uninzi lwamaqumrhu karhulumente abhejela ekusungulweni kwezicelo eziziimobhayili zokubeka iliso kubemi kwaye ngaloo ndlela kulawulwa ubhubhane esihlangabezana nawo ngoku ngeenkcukacha ezichanekileyo. Nangona kunjalo, e-Australia ungquzulwano phakathi kwesicelo ngokuchasene ne-COVID-19 kunye nebhetri yabasebenzisi sele ikhutshiwe, Ngaba kufanelekile ukubheja kwezi teknoloji?
Okokuqala, kufuneka sikhankanye ukuba i-Australia ithathe isigqibo sokumilisela esi sicelo esele sikhutshelwe kwizixhobo ezizizigidi ezibini elizweni. Esi sicelo sisekwe phantse ngokupheleleyo kuhlobo olwenziwe yiSingapore kubemi balo ababizwa ngokuba yiTraceTogether. Ngoku kuza iingxaki, i-iOS ivala ezo zicelo ngasemva ezisebenzisa iBluetooth kunye nezinye izinto ukugcina ubumfihlo babasebenzisi, kwaye oku kubangela ukuba abasebenzisi bavule rhoqo isicelo sayo ukuba sisebenze ngokufanelekileyo, nto leyo ebangela ukusetyenziswa kwebhetri ephezulu kakhulu.
U-Apple sele watsho ngamanye amaxesha: "Akufanele uvale ngokupheleleyo ii -apps ezikwi-iOS, ezisebenzisa ibhetri eninzi kuba kufuneka uziqale kwakhona, i-iOS ilawula ukwenza izinto ngokuzimeleyo". Oku akwenzeki ngokomzekelo kwi-Android, apho inkqubo ingekho kakhulu ngolu hlobo lokusebenzisa usetyenziso ngasemva. Ke ngoko, kubonakala ngathi eyona nto isengqiqweni kukulinda iApple ukuba iphumeze eyayo inguqu okanye iqhubeke nokutya ngakumbi ukusetyenziswa kwebhetri ephezulu kusetyenziswa ezi zicelo zikarhulumente ukuze senze into yethu ngokuchasene ne-COVID-19.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ii -apps ezichasene ne-COVID-19 kunye nengxaki yebhetri
I-FaceTime: Yeyona App ikhuselekileyo yeFowuni yokuFowuna?